Diisambar 2021 – Talooyin Cheats Android
Monthly Archives: Diisambar 2021
ZIO iyo Qishka Sixirka&Hack
“Sixirku waa inuu ahaadaa aadanaha!” Buugagga Sixirka ayaa u oggolaanaya xitaa bini'aadamka caadiga ah inay isticmaalaan sixirka!Adiguna waxaad noqon kartaa saaxiriinta aduunka ugu xoogan ilaa inta aad haysato duubabka sixirka ee ay samaysay Zio! —————————————————————————————-Dagaalka u dhexeeya mages iyo warlocks ee dhulka saaxiriinta 'Aerok'…'Adeer’ waxay ku guulaysteen inay xidhidhiyaan dagaal-oogayaashii ugu xooga badnaa. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu lumiyay inta badan… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Sixir, Scrolls, ZIO
Poppy Punch – Garaac iyaga! Khiyaamo&Hack
Poppy Punch waa ciyaarta dagaalka Poppy! Ku garaac qof kasta oo ka soo baxa giraanta gacan qaloocsan. Mid kaliya ayaa noqon kara guuleystaha! Adiga iyo kuwa kale ee xafiiltama waxaad tihiin Poppy. Dhammaan dagaalyahanada ayaa waji ka waji ugu kulmi doona giraanta, nin walbana waa u dagaalami doonaa! Hawshaadu waa inaad ka takhalusto dhammaan kuwa kaa soo horjeeda… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Knock, Poppy, Punch
Seef Master: Ragdoll Fight 3D khiyaamooyin&Hack
Diyaar ma u tahay dagaallada xiisaha leh ee Seef Master: Ragdoll Dagaal 3D? Waa waqtigii aad naftaada u noqon lahayd sayid ragdoll seefta! Ciyaartu waa mid aad u fudud. Xakamee siddeedda oo ku duul seef si aad u gooyso dhammaan cadawga. Soo hel furaha oo ka bax maskaxda. Seeftaadu waxay qarxin kartaa fuustooyinka TNT, leben jebi,... Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Dagaal, Master, Ragdoll, Seef
Waan Arkay: Hel Dhammaan Kala Duwanaanshaha! Khiyaamo&Hack
Diyaar ma u tahay in aad noqoto qof garaad badan oo kala duwan raadinta? Soo deji ciyaartayada cusub ee halxiraalaha bilaashka ah ee 'I Spotted It' oo isku day inaad ka heshid kala duwanaanshiyaha sawirada., waxyaabo xiiso leh, baabuur qaali ah iyo xayawaan qurux badan ayaa ku sugaya ciyaartan! Tani waa ciyaarta ugu fiican ee lagu tababaro fikirkaaga macquulka ah… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, kala duwanaansho, Find, Spotted
Hide Poppy 'N Seek – Khiyaamo&Hack
Qari Poppy 'N Raadi wakhtiga ciyaarta, qari hore oo wanaagsan oo ciyaarta raadso oo leh wax yar oo naxdin leh. Orod ka qari Huggy Wuggy ama noqo Huggy laftiisa si aad u qabsato ciyaartoy kale. Hel ama la helo, waa adiga! Qarsoole ahaan, waa inaad aad u degdegtaa si aad uga cararto gacanta Huggy markaad caawinayso inaad... Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, hide, Poppy, seek
Kubadaha Pop Pop – Khiyaamo&Hack
Ku raaxayso wakhtigaaga caadiga ah ee Pop Pop Balls ! Haddii aad jeceshahay ciyaartan, fadlan la wadaag asxaabtaada oo wada baashaal! Xeerarku waa FUDUD:1、Ku biir kubbadaha isla lambarka2、Hel kubbadaha nambarada sare marka aad ku biirto laba3、Hel nambar cusub sifooyinka Isku-dhafka Kubadaha:1、Naqshad qurxoon & saamaynta ciyaarta cajiib2、Si fudud wax loo barto… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: Balls, CheatsHack, POP
Horror Poppy: Cutubka Koowaad – Khiyaamo&Hack
Ma xallin kartaa dhammaan xujooyinka oo ma ka dhigi kartaa mid nool warshadan la dayacay? Ciyaartoyga aargoosiga ah ee lagu magacaabo Huggy ayaa kugu sugaya gudaha mawjkan. Isticmaal gacantaada buluuga ah ee xoogga badan iyo gacanta cas si aad u jabsato wareegyada korantada ama aad wax kasta uga qabsato meel fog. Baadh xarunta daahsoon… oo aan la qabsan! Ciyaarta oo dhan, adiga… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: Cutubka, CheatsHack, Horror, Poppy
Huggy Stretch Game – Khiyaamo&Hack
Ku soo dhawoow ciyaarta halxiraalaha fidsan ee cusub. Aan ciyaarno ciyaarta Huggy Stretch Game oo aan badbaadino Huggy anagoo buuxinayna heerarka xiisaha leh ee ciyaaraha halxiraalaha cusub. ❄️ SIDEE LOO CIyaa CIYAARAHA STECH:• Guji oo kala bixi lugaha ama gacmaha si aad u gaarto meesha loo socdo, aadna uga digtoonow... Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, ciyaar, Huggy, Stretch
Xanaaqa Battle Dragon – Khiyaamo&Hack
Dhawaaqa masduulaagii ayaa cirka iyo dhulka ruxaya,Xirfadduna waa xoog badan tahay oo qurux badan, masduulaagii afartiisa madax lahaa wuxuu is taagay samada iyo dhulka dhexdooda, oo ay ku jiraan ololka, onkod, baraf iyo danab, iyo dadka xunxun ayaa ku soo duulay masduulaagii… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: Dagaal, CheatsHack, DAYAX, Cadho
Sheekooyinka Halyeyga 2 – Khiyaamo&Hack
Saadaasha cabsida leh ayaa ku timid afka-hadalka - balaayadu waa soo socotaa. Saaxiradda caasiyiinta ah waxay ku dhowdahay inay badbaadiso adduunka ama dumiso… “Sheekooyinka Halyeyga ah: Cataclysm" waa ciyaar tacabur ah oo ka mid ah noocyada walxaha qarsoon, oo leh ciyaaro-yar oo badan iyo xujooyin, jilayaasha aan la ilaawi karin iyo weydiimo adag. 4 R Markaasaa riyo u timid afka. A… Akhri wax dheeraad ah »
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Halyeyga, Tales
Mommy Rope Game – Khiyaamo&Hack
Merge Master Blue Monster – Khiyaamo&Hack